Shabaabkii ugu badnaa oo dagaalka Bacaadweyn lagu laayey iyo wararkii ugu dambeeyey | XORRIYA NEWS
Home Siyaasadda Shabaabkii ugu badnaa oo dagaalka Bacaadweyn lagu laayey iyo wararkii ugu dambeeyey
Shabaabkii ugu badnaa oo dagaalka Bacaadweyn lagu laayey iyo wararkii ugu dambeeyey
Faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaal gelinkii hore ee maanta oo dhan socday oo degaanka Bacaadweyn ee Gobolka Mudug ku dhex maray Alshabaab oo dhinac ah, ciidamada dowladda iyo maleeshiyada dageenka oo dhinac ah.
Dagaalka oo muddo socday, islamarkaana ku billowday qaraxyo ayaa waxaa kooxda Al-Shabaab u suurta gashay inay gacanta ku dhigaan inta badan magaalada iyo saldhiggii ay daganaayeen ciidamada 21-aad ee xoogga dalka.
Sidoo kale Al-Shabaab ayaa gacanta ku dhigtay 4 gaari oo kuwa dagaalka ah oo laba kamid ah ay saarnaayeen qoriga suugga.
Maleeshiyada degaanka oo dib isu abaabulay ayaa weerar rogaal celin ah dhowr jiho uga qaaday maleeshiyada Al-Shabaab, waxayna dib u qabsadeen magaalada Bacaadweyne, waxaana halkaasi ka dhashay qasaare culus oo dhinacyada kala gaaray.
Dagaalkii labaad ee rogaal celin ayaa waxaa lagu dilay ku dhawaad 25 ka tirsan Al-shabaab-kii weerarka soo qaaday, waxaana dadka deegaanka u suurtagashay inay dib usoo celshaan laba kamid ah gawaaridii ay Maleeshiyada Al-shabaab weerarkii koowaad ku qabsatay.
Dhanka kale, Al-Shabaab ayaa weerarka ay aroortii hore soo qaaday ku dishay ilaa 6 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda ee ku sugnaa gudaha saldhigga 21-aad, waxayna dadka deegaanka xaqiijiyeen in 4 kamid ah 6-da askari ee la dilay la gowracay.
Sidoo kale, dad goobjoogayaal ah ayaa xaqiijiyey in gacanta lagu dhigay 4 kamid ah maleeshiyadii ka tirsaneyd Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday oo 3 kamid ah ay yihiin dhaawac aad u daran.
Waxaa baraha bulshada lagu faafiyey sawirada dagaalamayaashii ka tirsanaa Al-Shabaab ee lagu laayey dagaalka iyo mid kamid ah kuwii gacanta lagu dhigay iyagoo nool oo la sheegay inuu ahaa horjoogihii Al-Shabaab ee dagaalka Maanta dhacay.
Waxaa hadda dagan xaaladda magaalada Bacaadweyne, waxaana goobihii lagu dagaalamay dib u qabsaday ciidamada Dowladda Soomaaliya oo garab ka helayo ciidamo u abaabulan hab beeleed oo ku sugan gudaha Magaalada.